ऊर्जामा एडिबीको ६२ अर्ब लगानी, उपलब्धि निराशाजनक - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
ऊर्जामा एडिबीको ६२ अर्ब लगानी, उपलब्धि निराशाजनक
कार्तिक २०, २०७४ 651 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले अहिलेसम्म नेपालको ऊर्जा विकासमा ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यो उसले देशमा गरेको कूल लगानीको २६ प्रतिशत हो ।
हरेक वर्ष लगानीको दायरा फराकिलो हुँदै गए पनि त्यसको परिणाम आशा लाग्दो देखिएको छैन । एडिबीले हालै गरेको आर्थिक वर्ष सन् २०१७/१८ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा लगानी अनुसार उपलब्धि नभएकोमा असन्तृष्टि जनाएको छ ।
एडिबीका अनुसार हालसम्म एडिबीले नेपालमा करिब २ अर्ब ४३ करोड २० लाख ५८ हजार रुपैयाँ (२ अर्ब ३४ करोड ८० ला अमेरिकी डलर) लगानी गरेको छ । यसमध्ये करिब ६२ अर्ब ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (६० करोड २० लाख डलर) ऊर्जा विकासमा लगानी भएको छ ।
लगानीमध्ये ४५ करोड ९० लाख डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन । यस्तै, विभिन्न आयोजनामा ३६ करोड २० लाख डलरबराबरको ठेक्का लागेको छैन । सन् २०१६ मा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरे पनि २०१७ मा धेरै आयोजना अलपत्र रहेको जनाइएको छ ।
एडिबीको लगानीमा १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय (सासेक) विद्युत प्रणाली विस्तार, विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधारलगायत आयोजना सञ्चालित छन् । यसमध्ये सासेक र विद्युत प्रसारण विस्तारका अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको एडिबीको निष्कर्ष छ ।